Isingeniso Seqembu - Shandong Lanbeisite Educational Equipment Group Co., Ltd.
I-LONBEST Group yasungulwa ngonyaka we-2005 futhi yafakwa ohlwini lwe-NEEQ (National Equity Exchange and Quotations) enekhodi yamasheya angama-832730 ngonyaka ka-2015. Ihhovisi eliyinhloko liseJinan, China.
Singabantu ibhizinisi lobuchwepheshe elithuthukisa imishini yokufundisa ehlakaniphile yemvelo. Izibophezele ukuletha ukungabi nothuli, imvelo, ukubhala okukhaliphile nemishini yokufundisa kuyo yonke imindeni, isikole nenhlangano.
Njengamanje, sinabasebenzi abangaphezu kwe-400, izikhungo ezingama-28 zokusebenzela nokulungisa izifundazwe, inethiwekhi yokuthengisa emboza izifundazwe ezingama-31 eChina, kanye namazwe angaphezu kweziyishumi emhlabeni wonke.
Sakhe ngempumelelo amashabhu wokusebenzela ongenawo uthuli wokukhiqizwa kweBhodi LCD Lokubhala ngo-2016, sidala isikhathi esisha sokubhala esingenalo uthuli. Ukuthuthukiswa komkhiqizo onamandla nokukhiqiza kubeka isisekelo esiqinile sokukhula kwesikhathi esizayo.
Ngo-2018, iqembu latshale imali eyizigidi ezingama-30 zamadola aseMelika ukwakha ifektri endaweni yezentuthuko yaseJibei eJinan, eSifundazweni saseShandong. Le phrojekthi ihlanganisa indawo engaba ngamamitha-skwele angama-66,700.
Ikhwalithi; Insiza; Ukusungula
I-LONBEST Group ibilokhu ilandelwa njalo kwifilosofi yebhizinisi "Quality First" selokhu yasungulwa. Sinikezela ngemikhiqizo yokuncintisana ngokwakha iqembu le-QC ukwenza ngcono inqubo yokuhlola ikhwalithi, ukuqinisa ukuphathwa kwekhwalithi, kanye nokusebenzisa ukubhekwa.
I-LONBEST ibilokhu ibheka ukufunwa kwamakhasimende njengenhloso yenkonzo. Amakhulu abasebenzi anikezela ngezinsizakalo zekhwalithi ngekhwalithi yenkonzo ehlanganisiwe nehlangene. Okwamanje, uhlelo lokuphathwa okuqinile nezindlela zokuhlola zilawulwa ukunikela ngezinsizakalo ezifanele, ezifika ngesikhathi futhi ezisezingeni eliphezulu.
Iqembu le-R & D lizenzele ngokuzimela imishini eminingi yokukhiqiza. Imikhiqizo ithole inqwaba yamalungelo obunikazi okuqamba, agcwalisa izikhala eziningi zobuchwepheshe emkhakheni wezinto zokufundisa ekhaya nakwamanye amazwe.
Hlela ukuba ibhizinisi eliyigugu kakhulu, elihlonishwa kakhulu, nelokumaka kakhulu ebhentshini.
Sizoqhubeka nokuthatha okufunwa ngamakhasimende njengamandla okusungula izinto ezintsha, sandise ucwaningo lobuchwepheshe kanye nokutshalwa kwezimali kwezentuthuko, futhi siqhubeke nokuhlinzeka ngemikhiqizo yokuncintisana, ezemvelo nezempilo, izixazululo nezinsizakalo zemfundo yomndeni, ukufundisa ezikoleni namabhizinisi ebhizinisi, ukudala inzuzo kumakhasimende futhi ube ngumphakeli womkhiqizo obaluleke kunabo bonke nabahlinzeka ngemisebenzi emkhakheni wokuvikelwa kwemvelo kwemfundo ehlakaniphile. Sigqugquzela umqondo wokubaluleka kokuvuleleka, ukubambisana nemiphumela yokuwina. Sizimisele ukusebenzisana nabalingani ukusungula kanye nokusebenza ngokubambisana ukukhulisa inani lezimboni, ukukhuthaza intuthuko enhle yezimboni nokukhuthaza inqubekela phambili yomphakathi.
Khonza Imfundo, Zuze Ikusasa
Ngemuva kwentuthuko esheshayo nengaguquki yeminyaka engaphezu kweyishumi, i-LONBEST yafakwa ohlwini emakethe ye-NEEQ ngonyaka ka-2015, futhi yalinganiswa njengenye yemikhiqizo “emisha phakathi kwamabhizinisi aphezulu ayi-100” ngo-2016. I-ILBEST ihola imakethe emkhakheni wokubhala we-LCD ibhodi nemishini yesikole. Ngokuzayo, sizosungula ipulatifomu ebanzi yokuthengisa esekelwe ekuthuthukisweni kwemakethe yomhlaba. Kuzokwethulwa amathalente nobuchwepheshe obukhulu Sihlose ukusungula ibhizinisi lentuthuko elenziwe kahle ngokuthuthukisa inhlalakahle yabasebenzi nokwenza izibopho zomphakathi eziningi futhi senze iminikelo emkhakheni wezemfundo nasekubhaleni imikhakha yamabhodi.